Qalbi Dhagax: geerida adeerkii boqoradda inta lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Qalbi Dhagax: geerida adeerkii boqoradda inta lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka
Qalbi Dhagax: geerida adeerkii boqoradda inta lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka
Boqorad si muuqata ayaa loo dhaqaajiyey markay qaylisay xafladaha subaxnimada ee Cenotaph ee London si loo xuso Xuska Xuska. ] Boqortooyadu waxay xidhiidh badan la leedahay ciidamada qalabka sida, xitaa waxay u sii fogaataa farsamoyaqaanada inta lagu gudajiray dagaalkii labaad ee adduunka . Runtii, shakhsiyaad badan oo muhiim ah noloshiisa, oo ay ku jiraan aabihiis gacaliye George VI iyo ninkeeda Prince Philip goobjoog u ahaa ficil militari.
La qoyska boqortooyada xitaa wuxuu naftiisa ku waayey dagaalkii labaad ee adduunka, adeerkii boqoradda, walaalkii George VI, isagoo lagu dilay hawl firfircoon.
Duke of Kent, Prince George, waxaa lagu diley 1942, isagoo jira da '39 sano.
Wuxuu aad ugu dhawaa walaalkiis ka weyn, King Edward VIII, George VI, wuxuu baabtiisay Albert oo caan ku ahaa qoyska sida Bertie iyo Henry.
Wuxuu kaaliye-yaal shaqsi ahaaneed u ahaa George VI waxaana lagu qasbay inuu dib u dhigo magacaabistiisa jagada Gudoomiyaha Guud ee Australia 1939 markii uu ka dillaacay Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Boqoradda Elizabeth II; George, Duke of Kent (Sawirka: Getty)
The Royal Brothers George, Edward, Bertie iyo Henry (Sawirka: Getty)
Sida Edward iyo Bertie labadaba, George wuxuu jeclaa duulista, amiirkuna wuxuu ku soo biiray RAF.
Sidoo kale sida walaalkiis oo kale boqorka, wuxuu adeegsaday awoodiisa duulista intii lagu guda jiray booqashooyinka rasmiga ah ee saldhigyada RAF si looga caawiyo kor u qaadida niyadda waqtiga dagaalka.
Duke wuxuu u duulay Iceland bishii Agoosto 1942, halka diyaaraddiisu ku burburtay meel u dhow Caithness, Scotland, halkaas oo ay ku dhinteen dhammaan hal qof oo rakaab ah.
Dhimashadiisa adeegga RAF waxay astaan ​​u tahay markii ugu horreysay sanadihii 450 sano oo xubin ka mid ah qoyska boqortooyada lagu diley adeegga firfircoon.
Duke of Kent wuxuu ahaa kabtanka kooxda RAF inta lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka (Sawirka: Getty)
Duke of Kent waa aabihii Amiir Michael ee Kent, wuxuu dhashay todoba usbuuc ka hor geerida lama filaanka ah ee aabihiis.
Hooyadiis, Marina, xaaskiisa George, waxay sii wadday inay kalkaaliye caafimaad ka dhigato dagaalka.
Musiibada ka dhalatay awgeed, wiilka boqortooyada ugu yar, Henry, waa laga mamnuucay xafiiska intii lagu jiray dagaalka.
Kaaliyayaashu waxay sidoo kale ka walaacsanayeen ku adkaysiga George VI ee ku adkeystay inuu sii wadi doono hawlgallada niyad jabinta ah ee loogu dirayo ciidamada jooga dibadda.
George wuxuu guursaday Princess Marina oo u dhalatay Griiga, inaadeerkiis Amiir Philip (Sawirka: Getty)
Amiir Michael de Kent, oo la sawiray gabadhiisa Lady Gabriella Windsor, wuxuu ku dhashay maalmo yar ka hor geeridii lama filaanka ahayd ee aabihiis. (Sawirka: Getty)
Taariikhyahan Kate Williams, oo ka hadlaya Dukumiintiga 5 ee "Sirdoonka Boqortooyada Farshaxanka", wuxuu sharxayaa: "Si kasta oo uu u amaan yahay, George wuxuu ku adkaystay inuu diyaaradda u isticmaali doono inuu arko. ciidamadiisa.
"Dawladdu had iyo goor waxay ku dhahdaa: waa mid aad u khatar badan, waa inaan qabsanaa, waa la dili karaa, waan dhaawici karnaa, kaliya nabad maahan.
"Laakiin gabi ahaanba wuu ku adkeystay."
Si kastaba ha noqotee, sirta buuxda ee diyaaradda boqorka loo qorsheeyay, si aan loogu shaacin goobta uu ku yaal ciidamada cadowga, ayaa sababay musiibo dhow.
Boqoraddu waxay noqotay kaaliye labaad ee ATS inta lagu gudajiray dagaalka (Sawirka: Getty)
Majetsygiisa waxaa si muuqata loogu dhaqaaqay munaasabadaha maanta (Sawirka: Getty)
"Et un coup de feu fut donc dirigé vers la fuite du roi car ils pensaient qu'il s'agissait peut-être d'un avion ennemi."
Un autre oncle du Queen's, Fergus Bowes-Lyon, frère de la reine mère, a été tué au combat pendant la Première Guerre mondiale.
Le soldat Black Watch, âgé de 26 ans, a été tué à la bataille de Loos en 1915.
PHOTOS. Abaalmarinta Muusikada NRJ: Jenifer, Bilal Hassani, Aya Nakamura ... dhammaan muuqaalka rooga guduudan
Abaalmarinada Muusikada NRJ 2019: jaakad aad u muuqata (oo aad qaali u ah) Matt Pokora oo saaran roog cas
Saacadaha Wanaagsan! of 14 November 2019 oo leh Camille Cottin iyo Jean-Pierre Darroussin - VIDEO
DADKA & LIFESTYLE7,498